किम-सिबीच राजनीतिक भेटवार्ता, हाेला त ट्रम्पको टोन डाउन ? – Himalaya TV
Home » अन्तर्राष्ट्रिय » किम-सिबीच राजनीतिक भेटवार्ता, हाेला त ट्रम्पको टोन डाउन ?
किम-सिबीच राजनीतिक भेटवार्ता, हाेला त ट्रम्पको टोन डाउन ?
२६ पुष २०७५, बिहीबार १३:३२
काठमाडा‌ैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग दोस्रो शिखर वार्ताको तयारी चलिरहेकै बेला उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन फेरि चीन भ्रमणमा पुगेका छन् । किमको यो चौथो चीन भ्रमण हो । यसअघि मार्च २६ मा किम पहिलो पटक चीन भ्रमणमा गएका थिए । सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । भ्रमणकाे उद्देश्य थियो, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इन र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग शिखर वार्ता गर्नुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको विश्वास आर्जन गर्ने ।
यसबीचमा उनले थप २ पटक चीन भ्रमण गरे । दोस्रो पटक मुनसँगको वार्ता र तेस्रो पटक ट्रम्पसँगको बार्ताका बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी लाई जानकारी दिन उनी चीन पुगेका थिए । त्यतिखेर किमलाई सीको विश्वास हासिल गर्न चीन जानै पर्ने बाध्यता थियो । किनकी चीनलाई उत्तर कोरियाको एक मात्र मित्र भनिए पनि यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सुमधुर भने थिएन । स्वयं सीकै पनि किमसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । उत्तर कोरियाले पटक-पटक चीनको अनुरोधलाई लत्याउँदै आणविक परिक्षण गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको १८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनकै क्रममा चीनको अनुरोधका बाबजुद पनि उत्तर कोरियाले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो । उता चीनले उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्कोर प्रस्तावनामा समर्थन जनाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक सन् २०१७ को डिसेम्बर २२ मा उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध कडा पार्ने प्रस्तावनामासमेत चीनले समर्थन जनाएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएको उत्तर कोरियालाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग आत्मविश्वासका साथ वार्ता गर्न र वार्तालाई सकारात्मक दिशा दिन चीनको साथ जरुरी थियो । फलस्वरुप किम चीन पुगेका थिए ।
अहिलेको भ्रमणलाई पनि ट्रम्पसँगको वार्तामा आफ्नो पल्ला भारी पार्ने तयारीकै सिलसिलासँग जोडेर हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा यो भ्रमणले विश्व शक्ति दाबी गर्ने अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने किमको चाहनाको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
यतिखेर मेक्सीकोको सीमामा पर्खाल लगाउने बजेटको अडान र सिरियाबाट अमेरिकी सेना फर्काउने निर्णयले ट्रम्प आफ्नै देश र मित्र राष्ट्रहरुको दबाबमा छन् । उता चीनसँग ब्यापारमा टक्कर लिन खोज्दाखोज्दै ब्यापार युद्धको स्थितिमा पुगेपछि स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न आफ्ना ब्यापार प्रतिनिधी चीन पठाउन पनि ट्रम्प बाध्य भएका छन् । यस्तोमा किमको यो भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ट्रम्पको टोन डाउन गर्ने किमको प्रयासको रुपमा हेरिरहेका छन् ।